सरकारी गाडिमाथी गरिएको आगजनी गल्ती थियो, माफ पाउँ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- दिलुु पन्त
युवा संघ नेपाल नेपाली युवाहरुको ढुकढुकी हो । आशा र भरोसाको केन्द्र पनि हो र हुनुपर्छ । तर, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिले सही बाटो नलिएका बेला युवा संघ पनि कतै रुमलिएको होकी जस्तो देखिएको छ । यही बेला युवा संघ शोकको घडीमा छ ।
युवा संघ संधै तोडफोडको विरुद्धमा छ:
रुपन्देहीमा युवा संघका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या युवा संघलाई मर्माहत त बनाएको छ कानुनी रुपमा त्यसको बदला लिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । लामो समयसम्म ज्यानको संकटमा रहेको जानकारी पाउदा पाउँदै पनि प्रशासनले सुरक्षा दिन नसक्नुले नेपाली युवाहरुको सुरक्षा माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । शोक, चुनौतीका बीचमा अहिले युवा संघमा आवद्ध युवाहरु आक्रोशमा पनि छन् । त्यही आक्रोशको निशानीमा केही दिन अघि सरकारी गाडी परेको छ ।
सन्दर्भ र ठाउँ नमिल्ने ठाउँमा घटना भएको छ । युवा संघ नेपाल जहिले पनि बन्द, तोडफोड आगजनीको विरुद्धमा छ । त्यसै अनुसारको नीति पनि बनाएको छ । जुन विधान युवा संघले बनायो, त्यही विधान विपरित केही जिम्मेवार नेताहरुको संलग्नतामा बानेश्वरमा सरकारी गाडीमाथि आगजनि हुनुले युवा संघलाई नै लज्जित बनाएको छ । म युवा संघको तर्फबाट त्यो घटनाका विषयमा क्षमा माग्न चाहान्छु ।
तर युवा संघका पदाधिकारीसहितको घटना भएकाले युवासंघले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सँगै त्यसको घटनाको वास्तविकता, युवा संघको नीति, निर्णय र नेतृत्वको निर्देशन विपरित त्यो घटना कसरी भयो ? त्यसको खोजी पनि गरिनुपर्छ हामी गछौ ।
सिंगो एमाले बदनाम हुन सक्छ
हरेक व्यक्ति वा संस्थालाई एउटा घटनाले पाठ सीकाउने गर्छ । अब त्यस्ता घटना हुन नदिनका निम्ति युवा संघले विषेश भूमिका खेल्नुपर्नेछ । कानुनी राज्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लडाईमा लागेको युवा संघ आफै गैरकानुनी तोड–फोडमा लाग्नु हुँदैन । दुर्गा तिवारीलाई सहिद घोषणा गर्न स्थानिय प्रशासनले सिफरिस गरेको छ ।
त्यसमा अब दवाव बढाउनुपर्छ । खुलेयाम चुनौती दिने हत्यारालाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन, तत्काल पक्राउ गरेर कारावाही गर्नुपर्छ । हाम्रो दवाव त्यसमा हुनुपर्छ । राज्यले कानुन सम्मत ढंगले अगाडी बढेन भने खबरदारी गर्नुपर्छ । आफु कानुनभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण दवाव अभियानमा लाग्नुपर्छ ।
कहिलेकाँही घटना घट्छ । निर्णयपछि हुन्छ त्यसलाई युवासंघको नीतिका रुपमा बुझ्नु हुन्न । त्यो घटनामा घुसपैठ छकी ? जो साथीहरु संलग्न भए ती साथीहरुले गाडी जलाउने काम किन गरे ? त्यसको समिक्षा र खोजीमा युवा संघ लागि रहेको छ । यदी त्यो घटना अराजक नै हो भन्ने निस्कर्ष निस्कियो भने ती साथीहरुले कारवाही भोग्नुपर्छ ।
नीति, विधान नेतृत्वको चेन अफ कमाण्डमा अगाडी बढ्न सकेन भने युवा संघ अराजक दस्ताका रुपमा परिणत हुन जान्छ ।
युवासंघमा रहेका आम युवाहरु देशको राजनीतिलाई मूल बाटोमा हिडाउन खोजेको नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पनि हुन् । एक जना युवाले गलत गरे मात्रै भनेपनि सिंगो एमाले जोडिन सक्छ ।
त्यसमा हरेक युवाले सचेततापूर्वक सोच्नुपर्छ । राष्ट्रभन्दा माथि पार्टी छैन, पार्टीभन्दा माथि त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता कोही पनि छैन र हुँदैन । कुनै एउटा घटनालाई लिएर रगतको बदला रगत भन्ने हो भने नीति, विधी कानुन किन चाहियो ?
शुद्धिकरण कहिले गर्ने ?
१७ महिना भयो, युवासंघको बैठक बस्न सकेको छैन । युवाहरुको बीचमा स्वयम् नेता घोषणा गर्ने मनोवृति पनि पलाएको छ । अब समिक्षा गरेर नयाँ बाटो तय गर्नुपर्छ । त्यो नयाँ बाटो तय गर्न संमग्र युवाहरुका संगठनबीचमा युवाहरले युवा संघलाई कुन रूपमा बुझेका छन् ? यसका गतिविधीलाई कसरी लिएका छन् ? नागरिकको सुझाव के छ ? अब कसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन् ? यस्तै कुराको चिन्ता गहिरो मन्थन गर्नुपर्छ ।
अब पार्टीमा कुन नेताको फेरो समाएर कसको उतराधिकारी को ? भन्ने फगत अनावश्यक प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ । युवासंगठन आम युवा र राज्यसत्ताबीचको पुल बन्नुपर्छ । अहिलेपनि हरेक दिन झण्डै २ हजार युवा विदेशी रहेका छन् । लाखौ युवा बाहिर छन् ।
स्वदेशमा भएका युवाहरु अलमलमा छन् । यस्तो बेला सबै नेपाली युवाहरको जनताको भाग्य र भविष्य बोक्ने चक्काको रुपमा युवा संघ रुपान्त्रण हुनुपर्छ । अहिले पनि नगरे आफुले आफैलाई सुद्धिकरणको चिन्ता कहिले गर्ने ?
पन्त युवा संघ नेपालकी उपाध्यक्ष हुन ।
कहीँ नभएको जात्रा जस्तो अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि ...